Global Voices teny Malagasy » Ny Fomba Ampianaran’ireo Sekoly Maro Ao Brezila Ny Mpianatra Ao Aminy Hihinana Ny Anana Voleny · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny Fomba Ampianaran'ireo Sekoly Maro Ao Brezila Ny Mpianatra Ao Aminy Hihinana Ny Anana Voleny
Voadika ny 28 Febroary 2016 17:05 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika (fr) i Elodie Belbeoc'h, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Sakafo
Ankizy ao amin'ny taona faha-enina ao amin'ny sekoly Leão Machado ao Sao Paulo. Fomba iray miparitaka be ho entina manampy ny ankizy hihinana sakafo ara-pahasalamàna ny zaridaina an-tsekoly ao Brezila. Sary: Rhitu Chatterjee. Fanomezandàlan'ny PRI.
Ity lahatsoratr'i Rhitu Chatterjee  ho an'ny The World  dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  ny 11 febroary 2016 ary averina avoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizàra vontoaty.
Eny amin'ny tehezan'ny havoana iray amin'ny tanànan'i São Paulo, amperinasa ny andiany iray amin'ireo ankizin'ny taona faha-enina. Fitaovampiadiana eny amin'izy ireo ny voa, ny tany ary ny fitambaran'ireo fitaovana fikolokoloana zaridaina. Tavoahanginà sodà natsongoloka, feno rano, no mihodidina ireo ampahantany kely mahitsizoro. Zazalahy iray antsoina hoe Felipy Pigato no manazava amiko fa eo am-panomanana ny tany hovelena ry zareo.
“Omaly, nafangaronay tamin'ny faikanà voanio ny tany”, hoy izy manazava. “Manohana ny voa ao anaty tany ireo faikanà voanio.”
Androany, mitantara izy fa ho ampian'izy ireo zezika. Eo am-pihadiana, manosika ireo bongan-tany ny mpianatra, ka amin'izany dia mahaforona lavaka somary lalindalina ihany, izay ibitabitahan'ireo kankana eo amin'ilay tany vao avy navadika.
Mateus Feitosa de Almeida, 12 taona, manilika moramora ny tany manodidina ny kankana iray. “Tsy maintsy sintonina tahaka izao mba tsy handratra ny kankana,” hoy izy manazava. “Ratsy ho an'ny tany raha esorina izy ireny.”
Ao aminà tanàna kely iray milamina ahitàna saranga antonony no miseho izany asa izany, ao anaty zaridaina iray an'ny sekoly Leão Machado School, sekolim-panjakana iray lehibe ihany.
Mpampianatra roa no manaraka akiky ireo ankizy miasa, Daniel Giglio Colombo sy Marta Martins.
“Faharoa taonan'ny tetikasa izao”, hoy ny fanazavan’ Daniel, izay nanampy tamin'ny fanatanterahana ilay zaridaina fambolena. “Zavatra mitovy amin'ny tamin'ny taona lasa ihany no hovolenay — roquette , karazana salady, radia.”
Ampiasaina amin'ny sakafo ao an-tsekoly ireo legioma volen-dry zareo. “Kanefa, ny tena tanjona amin'ilay zaridaina an-tsekoly dia tsy ny hakàna taharo”, hoy izy, “fa hampianarana ny ankizy hoe avy aiza no niavian'ny sakafo, mba hiforonan'ny fifamatorana eo amin'izy ireo sy ny sakafony.”
“Rehefa anotaniana amin'ireo ankizy ny toerana niavian'ny salady, dia “tany an-tsena” no avalin'izy ireo” hoy Daniel. “Very ny fifandraisan'izy ireo amin'ny natiora, ny tany, ny famafàzana ary ny fambolena zavamaniry.”
“Ary dia hita amin'ny sakafo hanin-dry zareo izany”, hoy izy manazava, “izay efa zara raha mihinana sakafo ara-pahasalamana”.
Mitantara ireo ankizy fa mampianatra azy ireo fomba maroamin'ny fambolena sakafo ilay tetikasa zaridaina an-tsekoly, saingy mbola sarotra hatrany ho an'ny sasany amin'izy ireo ny mankafy legioma. Sary: Rhitu Chatterjee. Fanomezandàlan'ny PRI.
Toy ny any Etazonia koa, lasa malaza be eto Brezila ireo sakafo faran'izay nasiam-panovàna, toy ny toerana fisakafoanana haingana, ny sodà, sy zavapisotro avy amin'ny fary betsaka ‘fructose’. Ary dia miakatra be ny tahan'ireo tratry ny hatavezana, na eny amin'ny ankizy aza. Olana nasionaly iray nanaitra ny governemanta sy ireo manampahaizana amin'ny fahasalamana ao amin'ny firenena io. Noraràn'ny governemanta ao Brezila ny sodà, ny mofomamy sy ny biskoitra atao amin'ny sakafo any an-tsekoly. Nasainy nahena ihany koa ny fatran'ny sira sy siramamy any. Didiany ny tsy maintsy hisian'ny voankazo sy legioma, indray mandeha raha kely indrindra, isanandro.
“Tany ampiandohana, nanana fahazarana manilika ireo sakafo vao notazana ny ankizy”, hoy i Marta. Nantenainy sy ireo mpiaramiasa aminy fa hanova izany ny fisian'ny zaridaina an-tsekoly.
“Irianay ny hanefy fahazarana tsara lavitra avy amin'io tetikasa io”, hoy ny fanehoankevitr'i Marta. “Tianay hanatsara ny sakafony ry zareo ary ho anaty fahasalamana tsara.”
Ao ambadiky ny fiparitahan'ireo zaridaina an-tsekoly manerana an'i Brezila io hevitra io. Roa ambinifolo taona lasa izay ilay tetikasa no nitsiry voalohany, toy ny fandaharasa mpisava làlana tany aminà sekoly dimy, tao anatin'ny tetikasa iray an'ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena. Ankehitriny, efa an'arivony izao ireo zaridaina an-tsekoly any aminà tanàna 700. Ny ankamaroany dia fitantanana mahaleotenan'ny sekoly no manodina azy. Ny hafa tohanan'ny fiadidiana ny tanàna.
“Sarotra aloha hatreto ny hamantatra raha toa ireo zaridaina an-tsekoly ka tena nitondra fanatsaràna ny ara-pahasalamanan'ireo mpianatra”, hoy i Albaneide Peixinho, izay efa 13 taona no nitantana ny fandaharanasa breziliana momba ny sakafo an-tsekoly. Kanefa, manazava izy fa mandefa tatitra ireo sekoly ireo milaza fa nahafahan'ny ankizy nanàna fahatsapàna tsara kokoa momba ny sakafony ireny zaridaina an-tsekoly ireny.
“Noho ny fisian'ireo zaridaina an-tsekoly, hitan'izy ireo fa avy amin'ny tany ny sakafo,” hoy i Albaneide mitantara, ary dia mihinana ara-pahasalamana kokoa ry zareo.” Ny fanadihadiana sasany dia milaza fa mitondra ihany koa fiantraikany eo amin'ny fomba fisakafoanan'ny fianakaviany ireny ankizy ireny. “ Milaza aminay ireo ray aman-dreny hoe mihinana voankazo sy legioma betsaka ny ankizy, ary misisika mihitsy mba hihinana azy ireny rehefa any an-trano.”
Sarah Campos (ankavia) sy Juliana Santos, mpianatra fahiny tao amin'ny sekoly Leão Machado. Ambaran'i Sarah fa taorian'ny niasàny tao amin'ny zaridainan'ny sekoly no nihinanany voalohany indrindra ny radia. Tiany izy ireny ankehitriny. Sary : Rhitu Chatterjee. Fanomezandàlan'i PRI.
Tamin'ny taona lasa, nanaraka fampianarana momba ny zaridaina an-tsekoly tao amin'ny sekolin'i Leão Machado ao São Paulo i Sarah Campos,14 taona. “Tsy mbola nihinana radia mihitsy aho tany aloha,” hoy izy manazava. Nanandrana izy raha mbola teo am-pahandroana radia tao an-dakozia izy sy ireo namany, radia izay novolen-dry zareo teo an-jaridainan'ny sekoly .
“Tena tiako be ka dia niverina nihinana fanindroany mihitsy aza aho,” hoy i Sarah mitantara. Ankehitriny dia ambarany fa matetika mihitsy izy no mihinana radia. “Angatahako foana i neny mba hikarakara matetika azy io ho an'ny sakafo antoandro. Ataony salady miaraka amin'ny karaoty sy ovy. Tena tsara an.”
Hazavain'izy sy ireo namany fa eken-dry zareo amin'izao fotoana izao ny mihinana legioma bebe kokoa. Ezahan-dry zareo ny misoroka ny fandehanana any amin'ireo toerana fisakafoanana maimaika, ary tena mitandrina be amin'ny sakafony izy ireo.
Eny ivelan'ny zaridaina, manontany an'i Mateus aho, ilay ankizy niteny tamiko ny tokony hiarovana ny kankana, ny amin'izay zavatra nianarany tamin'io fampianarana zaridaina an-tsekoly io.
“Zavatra betsaka,” hoy izy. “Ohatra hoe ny miasa tany, ny atao hoe fangaro organika ho an'ny tany, ny ataon'ny biby mba hanatsaràna ny tany.”
“Inona no hainao momba ireo legioma ?”
“Hoe tsara ho an'ny fahasalamana sy ny fahasambaran'ny tena.”
“Mihinana legioma ve ise ?”
“Tsy io no tena tiako nefa heveriko fa any no valiny ankehitriny miaraka amin'ity tetikasa ity,” hoy izy nanazava tamin-tsikitsiky, somary menamenatra.
Antenainanay fa amin'ny faran'ny taompianarana, ho tiany izy ireny.
Ity lahatsoratra ity dia notontosaina niaraka tamin'ny fanohanan'ny Pulitzer Center on Crisis Reporting .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/28/79741/
 Rhitu Chatterjee: http://www.pri.org/people/rhitu-chatterjee
 dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2016-02-11/how-schools-brazil-are-teaching-kids-eat-their-vegetables
 Pulitzer Center on Crisis Reporting: http://pulitzercenter.org/people/rhitu-chatterjee